ब्लगः हजार केन्द्रीय सदस्यकाे माया लागेर आउँछ
फेसबुक, ट्विटर र टिकटकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को एउटा भिडियो (ब्याटल) भाइरल छ, जहाँ प्रचण्ड दोहोर्‍याइदोहोर्‍याइ भनिरहेका छन्, ‘यो नाटकै हो ।’
ओली पनि के कम ! उनी झन् स्वराघात दिएर बोल्छन्, ‘नौटङ्की नै हो ।’
रमाइलो लागेरै हुनुपर्छ, दुई नेताले छुट्टाछुट्टै मञ्चमा बोलेका कुरा जोडेर बनाइएको भिडियोलाई धेरैले शेयर गरिरहेका छन् । टिकटकमा डुएट गर्नेको संख्या पनि कम छैन ।
बेतुकको सत्ता खेलबाट आजित नागरिकलाई ‘आर्थिक समृद्धिको नेतृत्वकर्ता’ ओली–प्रचण्डबीचको हिलो छ्यापाछ्यापले सायद मनोरञ्जन दिलाइरहेको छ । सत्तालिप्साबाट सिर्जित संकट बिर्सने हो भने नेकपा राजनीति धेरैका लागि रमिता नै बनेको छ ।
‘हामी यता छौँ’ भनी आफू नहराएको प्रमाण पेस गरेका प्रचण्ड–माधवको आन्दोलन होस् वा आफूइतरका नेताको गतिविधिलाई नौटङ्की नै हो भनिरहेका ओलीको गतिविधिले नागरिकलाई मनोविनोद दिलाइरहेकै छ ।
निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै समूहको दाबी अस्वीकार गरिदिएयता अर्को ‘रमिता’ सुरु भएको छ ।
ओली समूह निर्वाचन आयोगको यो निर्णयप्रति ‘खुसी’ छ । यसको पुष्टि स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकटस्थका पछिल्ला अभिव्यक्तिले गरिहाल्छन् ।
काेभिडलाई देखाएर बालुवाटारबाट पाँच/सात मिनेटमा पुगिने धुम्बाराही जान नमानेका ओलीले सोमबार दाङ पुगेर खुसी साटेका छन्, 'केही मानिस बैठक छाडी चौतारीमा बसेर अध्यक्ष भएकाे घोषणा गर्दै हिँड्छन् । त्यो पनि आइतबार निर्वाचन आयोगले खत्तम पार्दिएछ ।’
निर्वाचन आयोगकाे निर्णयप्रति उनी निकै खुसी रहेछन् ।
अब उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको यो स्टाटस पढाैँ, ‘पहिले दरबारको पश्चिम ढोकामा सभक्ति बिन्तीपत्र चढाउँदा प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको इतिहासकै पुनरावृत्ति, अहिले कार्की बैंक्वेटमा आयोजित प्रचण्डपथीय भेलाबाट स्वघोषित अध्यक्ष बनेको १ महिना ४ दिनमै अवैध घोषणा । बुद्धिले अरूलाई खा, रिसले आफूलाई खा भनेको यस्तै भएर होला ! एकीकृत पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष बन्नभन्दा मनले मानेन । तेल दिँदा नखाने कोल चाट्ने गर्दा त यस्तै हुन्छ नै । मजाक– उधारो हुन्न, हाताहाती चाहिन्छ, पेरिसडाँडामा कुखुरी काँ ?’
ओली पक्ष खुसी नहोस् पनि किन, पूर्वएमाले छाडेर पूर्वमाओवादीसँग कुम मिलाएका माधवको अध्यक्ष पदलाई मान्यता दिन आयोगले अस्वीकार गरेको छ, जाे ओलीसँग एउटै घरमा रहँदा हाताहाती चाहियाे भन्थे । ओली पक्षकै भाषामा उधाराे पद अस्वीकार गरी नगद लिन गएका उनै माधव फेरि हिस्स परेका छन् ।
यसबाहेक अल्पमतमा रहेका ओलीलाई आयोगको निर्णयले राहत पनि पुगेको छ । त्यसैले ओली समूहका मान्छे रमाएका छन् । याे अस्वाभाविक होइन ।
तर, यहाँ रोचक कुरा अर्कै छ । माधव नेपालको अध्यक्ष पद खुस्किँदा ओली समूहले १ हजारभन्दा बढीले केन्द्रीय सदस्य पद गुमाएकाे छ ।
कतिपयलाई त फेसबुक र ट्विटरमा बधाई आउने क्रम जारी नै छ । के थाहा, यीमध्ये कतिपयले आफ्नो पद खुस्किइसकेको थाहै पो पाएका छैनन् कि ! थाहा पाउनेहरू पनि बिस्मातमा होलान्, ‘बेलुका केन्द्रीय सदस्यका रूपमा सुतेको थिएँ, बिहान उठ्दा फेरि वडा कमिटी सदस्य नै भएँछु !’
कसैले यतिकै ट्विटरमा लेखेका होइन रहेछन्, ‘ओलीले जोक गरेका थिए, कमरेडहरूले आफूलाई साँच्चै केन्द्रीय सदस्य ठानेछन् ।’
बरू ती नेताचाहिँ खुसी हाेलान्, जसले केन्द्रीय सदस्य पद बहिस्कार गरेका थिए ।
जे होस्, बधाई थापी नसक्दै पद गुमाउन पुगेका आफ्नाको दुःखमा दुःखी हुन छाडेर ओली समूहका नेताहरू माधव नेपालको पद गएकोमा फुरुङ्ग देखिएका छन् ।
राजनीतिमा अचम्म अचम्मकै कुरा देख्न पाइँदो रहेछ ! अवैध बनेका केन्द्रीय सदस्यहरूसमेत माधव नेपालको पद ‘चैट’ भन्दै काखी बजाइरहेका छन् । कोहीकोही त माधव नेपालको अध्यक्ष पद गुमेको समाचार फेसबुक ग्रुपतिर शेयर गर्दै बसेका छन् । ‘बेलडाँडी क्षेत्रकै पहिलो केन्द्रीय सदस्य’ रोशन खड्काको केन्द्रीय सदस्य पद चिप्लेको छ । तर, उनलाई आफ्नो पद गएकोमा दुःख छैन बरु माधव नेपालको पद के भएछ, त्यसमा चासाे छ । हेर्नुस् त उनकाे ट्वीट ः
माधव कामरेडको अध्यक्ष पद चाही के हुने भएछ ?
— Roshan Khadka (@roshankhadka3) January 24, 2021
बेलडाँडी क्षेत्रमाथि कत्रो बज्रपात ! बल्लबल्ल एउटा केन्द्रीय सदस्य पाएको, त्यो पनि उत्सव मनाइनसक्दै चिप्लिगयो । रोशन पनि उस्तै रहेछन्, बेलडाँडीले केन्द्रीय सदस्य गुमाएकोमा दुःखी हुन छोडेर माधव नेपालको अध्यक्ष पद अवैध भएकोमा खुसी हुने हो त !
रोशन मात्र होइन, केन्द्रीय सदस्य पद गुमाएका थुप्रैले माधव नेपालप्रति काखी बजाइरहेका छन् ।
अनि माधव नेपाल आफूचाहिँ के सोच्दै होलान् ?
पेरिसडाँडामा हिजाे साेमबार आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले मलाई अध्यक्ष मानेन त के भो ! प्रचण्डलाई अध्यक्ष मानेकाले हामी आधिकारिक भयौँ । म प्रचण्डलाई अध्यक्ष मान्न तयार छु । कोही बात छैन ।’
मुखले जे बोले पनि मनमा पिर त परेकै होला नि, भन्न पो नभाको त !
उसाे त, ओली र माधव–प्रचण्ड पक्षले छुट्टिएर गरेका सबै निर्णय निर्वाचन आयोगले नमान्ने भनेकाे छ । हेर्नु्हाेस् आयोग निर्णयकाे पूर्ण पाठः
आयोग पत्रको पूर्णपाठ
यसको अर्थ प्रचण्ड–माधवले ओलीलाई गरेको कारबाहीसँगै ओली पक्षले प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोस्नेसम्मका निर्णय अवैध ठहरिएका छन्, महासचिव विष्णु पाैडेल नै मान्य हुने भनिएकाे छ । तर, ठूलै युद्ध जितेजस्तै गरी अझै नेताहरू अर्काकाे घाटा देखाउँदै ताली पिटिरहेका छन् ।
ईश्वरबल्लभकाे शब्दलाई भक्तराज आचार्यले गाएका छन्, 'हजार सपनाहरूकाे माया लागेर आउँछ ।' माधवलाई जति अध्यक्ष पदकाे माया थियाे, उति नै माया ओलीलाई हजार केन्द्रीय सदस्यकाे थियाे हाेला । त्याेभन्दा बढी माया दुई महिने केन्द्रीय सदस्यहरूलाई थियाे हाेला ।
तर मूल कुरा के हाे भने, एक हजार पद गुमाएको ओली पक्षमा प्रचण्ड–माधव समूहको एउटा पद खुस्किँदा देखिएकाे यति विघ्न खुसीचाहिँ आफैँमा अचम्मको कुरा हाे । त्यसैले त ओली र प्रचण्डले भनेका रहेछन्, ‘यो नाटकै हो, यो नौटङ्की नै हो ।’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १३, २०७७, १७:३५:००